SAWIRRO: Adidas oo soo saartay kabihii ugu dambeeyay (Yaa ka mid ah xiddigaha xiran doona?) – Gool FM
(Berlin) 30 Abriil 2016 – Dufcadda cusub ee kabaha Adidas X 16+ PureChaos oo u naqshadaysan si aad u qurux badan ayaa saxaafadda loo dusiyey iyadoo lagu wado in lagu bilaabo final-ka Champions League oo 28-ka Maajo ku qabsoomaya San Siro.
Kabahan oo la sheegay inay qaadan doonaan magaca ‘PureChaos’ waloow laga yaabo in sidoo kale loogu yeero magaca ‘PureSpeed’ ayaa waxaa xiran doona laacibiinta horseedka ah ee haatan isticmaala Adidas X 15.1, sida Gareth Bale, Thomas Müller, Luis Suárez IWM, kuwaasoo u wareegi doona dufcaddan Adidas X 16+ PureChaos.
Kabahan ayaa ka dhex muuqan doona tartamada waawayn ee Euro 2016 iyo Coppa America oo xagaaga qabsoomaya.
SAWIRRO: Maxaa ka jira in la bedelayo astaanta AC Milan? (Funaanadda cusub ee 2016-17 oo la helay)